Uyazazi zonke izinhlobo nezinzuzo zamakhethini aseVenetian? | Imisebenzi yezandla ivuliwe
Imisebenzi yezandla ivuliwe | | Yezandla
Asikhulumi ngento entsha, ngoba i-venetian blinds Sekungamashumi eminyaka benathi. Kodwa-ke sebephenduke umkhuba, ngoba naphezu kokuhamba kwesikhathi basekhona kakhulu ezimpilweni zethu nasemakhaya ethu. Okuqale kwabonakala sengathi banendawo emahhovisi kuphela, sebevele bagqama futhi siyakuthanda lokho. Uyafuna ukwazi ukuthi yiziphi izinhlobo zazo kanye nazo zonke izinzuzo ezizethulayo?
Ukwazi lokhu kakade, singasho ukuthi sibhekene omunye izitayela eziyimpumputhe ezidume kakhulu emhlabeni wonke. Ngakho-ke, nabo umhlobiso wethu uzohlala uphumelela kakhulu. Ngakho-ke, asikwazi ukuhlala ngaphandle kwabo noma ngaphandle kwakho konke okufanele basitshele, okungekuncane.
1 Yiziphi izimpumputhe zaseVenetian?
2 Yiziphi izinhlobo zamakhethini aseVenetian?
3 Ungalinganisa kanjani izimpumputhe zaseVenice
4 Izinzuzo zalolu hlobo lwamakhethini okufanele uzazi
Yiziphi izimpumputhe zaseVenetian?
Njengoba kubonisiwe kithi, Ziwuhlobo lwezimpumputhe ezingaba nokuqedwa okuhlukahlukene ezintweni zazo kodwa zonke zenziwe ngohlobo lwamashidi avundlile. kuzoba yizo ezivikela ikhaya lethu. Amanye alawa mashidi angaba mkhulu kanti amanye abe mncane kakhulu, ngoba kukhona njalo okukhethwa kukho kukho konke ukunambitheka nezidingo. Ngenxa yezintambo abanazo, ungakwazi ukunweba noma, ngokuphambene nalokho, uphakamise ngokuphelele, uma udinga. Nakuba izinduku kuyizona ezisebenza njengeziqondiso, njengoba singenza ukukhanya okwengeziwe kungene lapho sikudinga noma mhlawumbe sikugweme ngokuphelele ukudlula lapho ilanga lishaya ngamandla.
Yiziphi izinhlobo zamakhethini aseVenetian?
Singathola izinhlobonhlobo ezithile kumakhethini aseVenetian ngoba awenzi nje kuphela izinto ezenziwe ngazo, kodwa futhi ukwakheka kwawo neminye imininingwane eminingi ozoyithola manje:
Ngokhuni venetian blinds: Zingezinye zezitayela ezinhle kakhulu. Bazivumelanisa nekhaya lesitayela se-rustic, lapho izinkuni zikhona kakhulu kuwo, kodwa futhi nakwesimanje kakhulu. Ziyizinto ezihlukahlukene kakhulu futhi zikhethwa kakhulu. Ngaphandle kokukhohlwa ukuthi bafaka i-insulating.
Izimpumputhe zaseVenetian ezinemibala ehlukene: Ngoba nakuba zenziwe ngokhuni, ungathola i-oki, i-walnut ngisho ne-white finishes.
Izimpumputhe ze-Bamboo Venetian: Zingenye yezinketho zemvelo kakhulu okufanele sizicabangele, nakuba yebo, zisenayo isiphetho kanye nezinzuzo zokhuni.
Aluminium Venetian Blinds: Kanye nezinkuni, kungenye yezinto eziceliwe kakhulu ngokwezimpumputhe zaseVenetian. Ungaba nobubanzi obuhlukene kuma-slats ukuze uhlangabezane nezidingo zakho.
Amakhethini aseVenice anama-slats aqondile: Nakuba kuyiqiniso ukuthi sijwayele ukubona ukuthi lolu hlobo lwezimpumputhe luwathatha kanjani avundlile, nawe unohlangothi oluphambene. Ngoba ukuqina kwengeza okwangempela embonweni ofana nalo. Njengoba ungase ucabange, zisebenza njengokungathi ikhethini.
I-PVC Venetian blinds: Uma ukhetha i-semi-rigid kuzoba enye yezinketho ezingcono kakhulu zokuqina okukhulu. Ngoba kuyiqiniso ukuthi bangakhubazeka ngenxa yokushisa.
Ungalinganisa kanjani izimpumputhe zaseVenice
Kungelinye lamaphuzu abalulekile ukwazi kahle ukuthi ungakanani usayizi esiwudingayo. Ngakho-ke, uma unenzuzo ecacile, lapho kukhona isikhala ezinhlangothini zombili, unakho kulula kakhulu. Ngoba Kufanele ulinganise kahle uhlaka lwefasitela elishiwo bese ubhala phansi isibalo. Sizokwengeza amanye amasentimitha angu-5 kulowo mfanekiso, kodwa ohlangothini ngalunye. Kungani? Ngoba ngale ndlela umphumela wokugcina uzoba ochwepheshe kakhulu, ohlanganisa lonke iwindi ngokuphelele.
Uma iwindi libheke ekhoneni futhi singekho isikhala kulelo hlangothi, sizobe sengeza amasentimitha angu-5 kuphela lapho kunesikhala. Uma iwindi linekhabethe eliyimpumputhe laseVenetian, khona-ke kufanele silinganise lokhu kuqala bese sizokwandisa amasentimitha adingekayo ukuze iwindi liphinde limbozwe yimpumputhe yaseVenetian ngokwayo. Uma usunezilinganiso kanye nempumputhe yakho yaseVenetian ekhaya, kufanele nje uyihlanganise ngendlela elula. Ngoba kukhona izisekelo okufanele ushelele kuzo izikhonkwane ezimbili abanazo. Ngaphezu kwalokho, ukuze zilungiswe, zinengxenye engenhla okuzodingeka uyigoqe ukuze ibe emgqeni ofanayo nezimpumputhe. Njengoba elula kanjalo!
Izinzuzo zalolu hlobo lwamakhethini okufanele uzazi
Kumele kushiwo lokho zihlukahlukene kakhulu, njengoba zivumelana nazo zonke izinhlobo zamafasitela nezitayela zokuhlobisa. Ngaphezu kokulawula inani lokukhanya ofuna ukudlula kubo, ngoba nguwe kuphela onegama lokugcina. Ukuhlanza futhi kulula kunalokho uma sicabanga ngamakhethini endabuko futhi njengoba kungeyona i-textile, singakhohlwa ngezibungu kuze kube phakade. Ungaba nazo ngemibala ehlukahlukene kanye nemibala. Yini enye esingayicela kumakhethini aseVenetian?
Indlela ephelele ye-athikili: Imisebenzi yezandla ivuliwe » Yezandla » Uyazazi zonke izinhlobo nezinzuzo zamakhethini aseVenetian?
I-Bear yezandla ongayenza nganoma yisiphi isikhathi